Dzidza Zvakawanda Nezve Zvitsauko Zvakanakisa MuAssassin's Creed | la-manette.com
Description: Iwe uri fan weAssassin's Creed uye unoda kuziva zvimwe? Verenga chinyorwa chedu uye iwe unogona kunyura mukati mechadenga cheiyi inoshamisa saga uye uwane zvinhu zvinonakidza. Ndeipi chikamu chaunofarira chiri kwauri, kana iwe unogona kuzviedza ese.
Nyika yemitambo yemazuva ano yakasiyana zvikuru nemakore makumi matatu apfuura. Zvimwe chetezvo ndezvekuonekwa kwevakawanda kwemufananidzo wengano wemutambi wevhidhiyo. Kunyangwe ruzhinji rwevanhu rwakagashira rudo rwepixels nemapolygons, zvekuti yakashandura niche yepakati kuita "fadhi" chaiyo inokwanisa kukanganisa zvikamu zvakasiyana zvevaraidzo. Zvirinani ndizvo zvakaitika kune mamwe mafranchise chaiwo, anokwanisa kuratidza runako rwavo mubhaisikopo, mu kasino ONLINE kana mundima yezvinyorwa.
Iyo Assassin's Creed saga muenzaniso unoshamisa. Akazvarwa muna 2007 munzvimbo dzakaoma dzeFrench Ubisoft kubva kumahombekombe eMuchinda wePezhiya, iyo Assassins nhevedzano haina kungobvisa tsika pamakomputa uye nenyaradzo yekushanya uye mareferensi enhoroondo, asi yakaenderera mberi yakasimba uye yakazara "yakakura" tambo yerondedzero, iyo yakasvika kumahombekombe emabhaisikopo nekuda kwefirimu naMichael Fassbender.
Yakaburitswa muna 2014 kuti ifambise nhevedzano mu (inenge) yezera-chizvarwa consoles - ikozvino iri kutengeswa zvakanyanya PlayStation 4 uye Xbox One - Assassin's Creed Unity yakaratidza kuve chimwe chezvitsauko zvinopokana mukugadzirwa kwese. kubva kuUbisoft.
Akabatwa nebugs nguva pfupi yatanga kuvhurwa zviri pamutemo, Kubatana kwakatiunza kuhupenyu kusagadzikana kweFrench Revolution, chimiro icho vateveri vakaramba vachidaidza. Kunyangwe paine yakanakisa graphical pesvedzero yenguva yekuburitswa, kumhanyisa kwemutambo, kukanganisa kwakawanda, uye makanika anorema zvakanyanya - uye pamwe akarerutswa zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura - yakaita Assassin's Creed Unity iine ruzha. Zvakaenzana kukanganwa ndiye protagonist yemutambo.
Verenga zvakare: GTA 5 cheat kodhi yePS4, Xbox One, PC - Wana mari yemahara paGTA
Assassin's Creed Rogue yakaburitswa muna Kurume 2018 mune yakadzokororwa vhezheni yePS3 uye Xbox 360. Inomiririra chimwe chikamu - chinoparadza, isu tingati - chekuchinja kwechizvarwa che transalpine saga. Uye ndiani, seKubatana, akange asina nzira yekunyengedza veruzhinji uye nyanzvi yekutsikirira nehunyanzvi hwese hweAssassin's Creed.
Assassin's Creed: Makoronike
China, India neRussia zvinosangana - uye kurwisana - mune trilogy inotenderera yakatanga kuonekwa pakati pa 2015 na 2016. Iyi mitambo mitatu inotaura nyaya dzinopindirana dzeAssassins dzakawanda, dzichizviratidza mune zvakasiyana zvikuru kubva kune zvitsauko zveAssassin's Creed, mu. manzwi ezvinooneka uye magadzirirwo emitambo. Chinhu chakakosha magirafu emativi maviri nechidimbu, zvichiita kuti aenderere kudivi-anotenderera Assassin's Creed character adventures asi ane matatu-dimensional modhi.
Chitsauko kubva kwazvakatangira, icho - willy-nilly - yakatanga tambo yakanyatsotsanangurwa kwete chete muma studio eUbisoft, asiwo mune yemukati panorama yemutambo wevhidhiyo. Pasinei nekukanganisa kwayo uye kudzokorora kwekutanga, yekutanga Assassin's Creed inoramba iri chiitiko chinonakidza uye chitsva - kunyanya kubva painorondedzera yemaonero - izvo zvinotiisa mune shangu dzaAltaïr Ibn-La'Ahad panguva yeCrusader. 2007 raive gore iro vatambi vese vakasvika pakuziva Animus naAbstergo, kurwa pakati peAssassins neTemplars uye, pakupedzisira, "mbiri" yaDesmond Miles, mugari wenhaka yemazuva ano kuhunhu hweAssassin's Creed kubva mumutambo nemamwe madzitateguru ayo. .
Verenga zvakare: 12 yakanakisa isina mvura mahedhifoni ekushambira
Chitendero chaAassassin iii
Assassin's Creed III inotaura nyaya yeNative American mhondi Connor Kenway panguva yeAmerican Revolution War. Sekurangarira kunoita vazhinji, yakaunza zvimiro zvitsva zvakati wandei kune canonical mechanics yesaga, sekugona kuunganidza vateveri vane zita rakasiyana uye hunhu, kuenda kunovhima kuFrontier, kana kuita mishoni dzemugungwa. Zvinosuruvarisa, zvakare inoisa iyo Assassin's Creed kuguma kune inofananidzira rondedzero mune yazvino Desmond Miles, chinhu chakasimudza mhino dzevateveri vesaga vakatendeseka uye, mune zvese, zvakaratidza kudzikira kwerondedzero. yeAssassin's Creed, yakatarisana ne zvisingafadzi zvikuru gare gare kutendeuka.
Assassin's Creed Origins uye Odyssey
"Kuzvarwa patsva" kweAssassin's Creed nyaya yakaitika mukupera kwa2017, apo Origins paakatsika tsoka pamahombekombe edu. PC, PlayStation 4 uye Xbox One. Ptolemaic Egypt inotsanangurwa zvakadzama muzita rinoshandura akawanda echinyakare maficha efranchise, achiunza zvinhu zveRPG kubva kuhunyanzvi hwese hweAssassin's Creed Odyssey, kurwa kwakanyanya uye hurongwa hunowedzera kufunga kufambira mberi.
Chitendero chaAassassin ii
Assassin's Creed II ndiyo nzvimbo yepamusoro-soro yakambosvikwa nefranchise, chitsauko chinofanira kuridzwa uye kudzokororwa pasina kuzvidemba, chiyeuchidzo chezvinyorwa zvenhoroondo, mutambo wemitambo uye kutaura nyaya, wakaiswa muRenaissance yakazara muFlorence, iyo Athens nyowani yemazuva ano uye guta rekumusha kweEzio. Kuburitswa kuri kuuya kwaAssassin's Creed kwave kuri kuenzaniswa kwezwi remhando yese kwemakore, uye yadzoka - pamwe neyakambotaurwa yeAssassin's Creed Brotherhood uye Assassin's Creed Zvakazarurwa - mune yakadzokororwa trilogy, iyo Assassin's Creed: The Ezio Collection. Zvakanakisisa chete, handizvo here?
Verenga zvakare: Iwo gumi neshanu akanakisa spy mitambo, maererano neMetacritic
Epamusoro gumi akanakisa emagetsi scooters ane zvigaro